Izinkinga zobusha, yiziphi izici. Lapho izinkinga zokuqala zokukhula zivela
Isikhathi sokushintsha kwengane kuyisivivinyo sangempela kubazali. Ingane yokumomotheka neyomusa izolo ngokuzumayo iba yintsha engenelisekile futhi ehoxisiwe. Emndenini kukhona ukungaqondani, izingxabano kanye nezingxabano, kubazali, njengabantwana ngokwabo, ngokuvamile abakulungele. Ezinkingeni eziyinhloko zobusha kanye nezindlela zokuzixazulula bese ukhuluma esihlokweni sethu samanje.
Abahlubuki abancane: izimbangela zokuziphatha ziguquguqukayo ezintsheni
Ngaphambi kokuxazulula izinkinga zentsha, kubalulekile ukuqonda imvelaphi ye "izinyawo" ngo-whims nabahlaziyi. Yiqiniso, isizathu esiyinhloko sisezinguquko zomzimba, noma kunalokho, ekubuyiselweni komzimba. Lesi isiphepho sangempela se-hormonal, esibhekene nazo zonke izimpikiswano zemizwelo, izinyembezi ezingenangqondo nokuhlukunyezwa okuvela kumfana. Iqala ngo-6-7 ebangeni. Kule nkathi lapho izinkinga zokuqala zentsha zivela: i-acne, ukuphuka kwezwi, ukuthuthukiswa okungahambisani nomzimba. Lesi sivunguvungu sizophela kuphela lapho ushintsho lwezinto eziphilayo kusukela emntwaneni kuya kumuntu omdala, cishe eminyakeni engu-16-18, luphelile.
Kodwa hhayi ama-hormone kuphela okumele abekwe icala ngezinkinga zokuziphatha kwentsha. Eziningi zezinkinga zinezinkinga zezimo ezingokwengqondo: ukungaqondisisani kwabazali, ukulahlwa kontanga, ubunzima bokuzibandakanya. Ngokuvamile, izinkinga zentsha zingahlukaniswa ngamaqembu amakhulu amathathu: okuhlangenwe nakho ngokomzwelo, izinkimbinkimbi zomzimba, izinkinga zokuxhumana.
Izinkinga ezisencane: okuhlangenwe nakho okuqinile ngokomzwelo
Amakhomoni - izici eziyinhloko ezicacisa isimo sengqondo ekukhuleni. Ba "buqili" kangangokuthi ngisho nokuncane okuncane kungabangela ukusabela okujulile ngokomzwelo ekuphenduleni. Ngakho-ke amandla aziwa kakhulu othando lokuqala, okuyinto engamthandayo ngokuphelele ingane. Futhi amahloni angenangqondo, ukuguquka kwemizwelo, ukucindezeleka, izingxabano kukhona nemiphumela yokuhlangenwe nakho okuqinile ngokomzwelo.
Ungasiza kanjani? Sondelani futhi nisekele. Kungcono ukwenza lokho okungahle kwenzeke, isibonelo, ukwabelana indaba efanayo kusuka ekuphileni kanye nolwazi lwakho. Ngokuvamile ukukhuluma ngenhliziyo ngenhliziyo futhi uyeke ukugxeka nokuhlekisa okuhlangenwe nakho kwezingane.
Izinkinga ezisencane: izinkimbinkimbi ngenxa yokubukeka
Ngisho noma ingane ingenayo i-acne nesisindo esiningi, lokhu akusho ukuthi uyajabula ngokubukeka kwakhe. Intsha ikwazi ukucabanga nge-self ekahle futhi ayifuni neze ukuhambisana nedatha yangaphandle yangaphandle. Lokhu kubangelwa izinguquko ezifanayo zomzimba, okuvame ukuba nomlingiswa we-spasmodic.
Ungasiza kanjani? Zama ukuchaza ukuthi umzimba onjalo ngeke ube njalo futhi maduzane uzokushintsha ube ngcono. Pushisa ingane emdlalweni. Kubonakala ukuthi izingane ezithinta ezemidlalo ezisebenzayo cishe zithola izinkinga ezisencane.
Izinkinga ezisencane: ubunzima bezenhlalo
Kulesi sigaba kungabizwa ngokuthi yizici zobunqunu bokuqala (amahloni, amahloni, ukuhlukaniswa), nokubonakaliswa kokuziphatha okungahambi kahle (ukuphuza utshwala, ukubhema, ukulimala, ukulutha izidakamizwa). Isizathu sezinkinga ezinjalo ngokuvamile kuvame ukungalingani komuntu ozizwayo nokuthi abanye bayamqonda kanjani.
Ungasiza kanjani? Ukukhuthaza oxhumana nabo abahle, khuthaza ukuxhumana nabangane abaseduze nabalingane nabo ekilasini. Uma ingane ingenabo abangane, khona-ke udinga ukumsiza ukuthi ayithole. Isibonelo, bhalela esigabeni sezemidlalo noma umbuthano wezithakazelo.
Iseluleko sengqondo: indlela yokwenza ukuqonda okuhambisana nentsha
Ingane ingafunda kanjani ngokushesha ithebula lokuphindaphinda?
10 Ukudla Okuyingozi Kakhulu
I-Anti-Aging Face Massage
Izitshalo zokuhlobisa: i-aglaonema
I-curd eyenziwe ekhaya